စိုးရိမ်ကြောင့်ကြရမှုကို ကခုန်ခြင်းနဲ့ တိုက်ဖျက်တဲ့ အဆိုတော် ဆမ်စမစ် - Yangon Media Group
လန်ဒန်၊ ဩဂုတ် ၇
အဆိုတော် ဆမ်စမစ်ဟာသူ့ရဲ့ ပြင်းထန်စွာခံစားနေရတဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့် ကြရမှုကို ကခုန်ခြင်းနဲ့ တိုက်ဖျက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသက် (၂၇)နှစ်အရွယ် အဆိုတော် ဆမ်ဟာ သူ့ရဲ့ သီချင်းအသစ် How Do You Sleep? မှာလည်း ကခဲ့ ပြီးတော့ ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ ကိုအဲ့ဒီသီချင်းနဲ့ ကခုန်ခြင်းကပြေပျောက် စေတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ သီချင်း ဗီဒီယိုအတွက် နောက်ခံပြင်ဆင်ချိန်မှာ ဆမ်က
“ကျွန်တော့်အတွက် ပြင်ဆင်ထား တာကြာပြီ။ ကျွန်တော်ကရတာကို သဘော ကျပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလေးအရွယ် ကတည်းက ကိုယ့်အကြောင့် ဖွင့်ထုတ် တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြစ် ခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်အိပ်ခန်းလေးထဲမှာပဲကခဲ့ရတာပါ” လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုကခုန်မှုဟာသူ့အတွက် စိတ် ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီးနောက်ထပ်ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်း မကြုံရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဂရမ်မီဆုပေးပွဲတုန်းကသူ့ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှု ပျက်လုနီးပါးဖြစ်မှာနဲ့ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ် မှုရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါ တယ်။ သူက ]]ဖွင့်ပွဲညမှာ ကျွန်တော် တော် တော်လေးတုန်လှုပ်နေခဲ့တယ်။ တော် တော်လေးကို ခံရခက်တဲ့ခံစားချက်ပါ။ အဆင်ပြေမှာပါလို့တော့ စဉ်းစားလိုက် တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံး နယ်လှည့် ဖျော်ဖြေပွဲထက်တောင် ပိုရင်တုန်မိတယ်။ တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်ခဲ့ရတယ်။ ဂရမ်မီ ဆုပေးပွဲမှာလည်း တော်တော်လေးစိုးရိမ် ခဲ့ရတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆမ်က “တစ်ခါတလေလည်း အတူ တူဖြေရှင်းကြစို့။ ဒရာမာတွေအရမ်းမချိုးနဲ့ တော့။ တော်တော်လေးများနေပြီ။ စိတ် လျှော့လိုက်တော့လို့ ပြောပေးမယ့် ကျွန် တော့် ဘေးနားကချစ်ရသူတွေကိုလည်း လိုအပ်ပါတယ်” လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မန်ယူ ယာယီနည်းပြအဖြစ် ရာသီကုန်အထိ ဆိုးလ်ရှား တာဝန်ယူမည်၊ မော်ရင်ဟိုကို ထုတ်ပယ်ပြီးနောက် မ??